Ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ugbu a dị mkpa maka azụmaahịa ime ụlọ San Francisco
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ugbu a dị mkpa maka azụmaahịa ime ụlọ San Francisco
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • culinary • omenala • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye isi obodo San Francisco na London
San Francisco ga-achọ ụlọ ọrụ na mpaghara ime ụlọ nwere kọntaktị dị elu iji nweta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi n'aka ndị na-elekọta ha na ndị ọrụ ha ka ha banye n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Iwu iwu ahụike maka ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke maka ndị na -elekọta ụlọ ọha, gụnyere ụlọ mmanya, ụlọ nri, klọb na mgbatị ahụ ga -amalite na Ọgọst 20.
Emere iwu ahụike iji kpuchido mgbasa na-aga n'ihu nke COVID-19, ọkachasị n'etiti ndị na-emeghị ọgwụ mgbochi.
Iwu San Francisco na -emepụtakwa ihe akaebe ọhụrụ nke chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka nnukwu mmemme na ebe ime ụlọ.
Onye isi obodo San Francisco kpughere iwu ahụike ọhụrụ ezubere iji chebe megide mgbasa na-aga n'ihu nke COVID-19, ọkachasị n'etiti ndị a na-anaghị agba ọgwụ mgbochi, ebe ụlọ ahịa na-emeghe ma na-enyere aka hụ na ụlọ akwụkwọ ka ghe oghe.
Ihe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa ugbu a maka azụmahịa ime ụlọ San Francisco
Mayor London Breed kwupụtara taa na San Francisco ga-achọ ka azụmaahịa na ngalaba ime ụlọ ụfọdụ dị elu nweta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'aka ndị na-elekọta ha na ndị ọrụ ha ka ha banye n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, iwu obodo ọhụrụ na -emepụta ihe akaebe ọhụrụ nke chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka nnukwu ihe omume na ebe ime ụlọ, na -achọ ndị bịaranụ dị afọ 12 ma ọ bụ karịa na mmemme na mmadụ 1,000 ma ọ bụ karịa iji nye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Breed kwuru, "Anyị maara na ka obodo anyị wee nwee ike ịlaghachi n'ọrịa ọjọọ wee nwee ọganihu, anyị kwesịrị iji ụzọ kachasị mma anyị nwere ịlụ ọgụ COVID-19 na nke ahụ bụ ọgwụ mgbochi,"
Na mbụ, iwu steeti na mpaghara chọrọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nnwale iji soro mmadụ 5,000 ma ọ bụ karịa gaa mmemme ime ụlọ.
Iwu iwu ahụike ọhụrụ maka ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke maka ndị na -elekọta ụlọ ọha, gụnyere ụlọ mmanya, ụlọ nri, klọb na mgbatị ahụ ga -amalite na Ọgọst 20.
Iji chekwaa ọrụ mgbe ị na -enye oge maka nnabata, ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ga -amalite na Ọktọba 13 maka ndị ọrụ, ka ọkwa ahụ siri kwuo.
Ihe achọrọ ịgba ọgwụ mgbochi maka mmemme ime ụlọ, nkeonwe na nke ọha, nke nwere mmadụ 1,000 ma ọ bụ karịa bịara na -amalite na Ọgọst 20.